Ilay torolàlana momba ny fifandraisan-davitra LEGO mahafinaritra miaraka amin'ireo tarehimarika | Famoronana an-tserasera
Ny torolàlana LEGO 'mahafinaritra' mankany amin'ny fiasana an-trano izay hahafaly anao
ny olo-malaza LEGO mahafatifaty manana zavatra mahafinaritra sy mahafinaritra mifandray mandrakizay. Io zavatra manintona io izao no mampifamatotra antsika hahafantatra fa ilay torolàlana LEGO hiasa avy any an-trano na ilay antsoina hoe teleworking.
Torolàlana tena manokana izay asaivo manao tsikitsiky ny tavanao. Ireo saribakoly LEGO dia toy ny hoe nitafy akanjo tamin'ireny fotoana ireny izahay rehefa nandray ny solosaina finday ary nanomboka nanao ny asanay.
Torolàlana iray tsikelikely toy ny hoe avy amin'ny torolàlana momba ny torolàlana IKEA; fa momba izay ihany aza adino ireo torolàlana ireo ho an'ny ankizy kely ao amin'ny trano IKEA ary mba hahafahan'izy ireo manangana manda amin'ny fanaka. Izany dia hahafahantsika miasa amin'ny fomba milamina kokoa ary hahafantatra ny fomba fampiasana tsara kokoa an'io fotoana ananantsika amin'ny fiasana an-trano io.
Jereo ity lahatsoratra ity ao amin'ny Instagram
Ireo torolàlana momba ny fananganana izay tsy fantatrao fa ilainao mihitsy - ny fomba fiasa avy any an-trano sy ny fahataitairana #LEGO #Minifigures #LetsBuildTogether
Lahatsoratra iray nozarain'ny Lego (@lego) amin'ny May 6, 2020 amin'ny 7: 00am PDT
The Guide Izany dia avy amin'ny fomba tsy maintsy anaovantsika akanjo any an-trano miaraka amin'ilay akanjo sy fatotra io ary koa voadio tsara, raha afaka mandeha miaraka amin'ny atin'akanjo eto ambany isika, raha mbola tsy adinontsika ny mifoha rehefa miditra amina antso an-tsarimihetsika amin'ny ZOOM isika; aza adino ny volanao virtoaly.
Another of the mipetraka tsara eo amin'ny seza ny mpitari-dalanaFa kosa, karazana birao ny hitazonana ny lamosina hahitsy, ary apetraho tsara ny kiho mba hahatonga ny tanantsika hitohy amin'ny 90 degre. Soso-kevitra vitsivitsy izay maneho tsara ny tarehimarika LEGO.
Na mazava ho azy, izany haingon-trano izay tsy maintsy misy eo amin'ny latabatra fiasantsika izany; raha mbola manana toerana malalaka isika, satria tsy ny tsirairay no manana ireo lavaka ireo hametrahana latabatra ao an-tranony tampoka. Na izany aza, e hevitra feno fahendrena avy amin'ny LEGO mba ho mora zakaina ny miasa ao an-trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny torolàlana LEGO 'mahafinaritra' mankany amin'ny fiasana an-trano izay hahafaly anao
Ny hevitra feno fahendrena, na tsia, an'ny Burger King miaraka amina Whopper ho an'ny halavirana ara-tsosialy
Efitra kely 30 novolavolan'ny studio Japoney Mozu Studios